VR Drone Autoflight Nyocha | Drone nwere igwefoto HD + iko FPV | Akụkọ akụrụngwa
Taa anyị ewetara gị a nyocha nke ohuru ohuru na anyị na-anwale izu ole na ole. Aha ya bụ Drogbọ ala VR Drone ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri dị n'etiti nke enyere maka ndị ọkwọ ụgbọ ọhụrụ na ịchọ ịbanye ụwa nke onye mbido ụgbọelu (FPV) na ọnụ ahịa ezi uche, ebe ọ bụ anyị nwere ya maka naanị € 199. N'etiti atụmatụ ya kachasị pụta ìhè, anyị nwere igwefoto HD-wide-angle, usoro nhazi onwe onye ga-enyere ndị ọkwọ ụgbọ na-enweghị uche aka na ịkwọ ụgbọ elu na abịa na VR Drone Glasses gụnyere na ngwugwu n'onwe ya. You chọrọ ịhụ ihe ndị ọzọ? Ọfọn, echefula nyocha anyị.
1 VR Drone Autoflight imewe na ihe
2 Igwefoto Drone
3 Atụmatụ Drone
4 Igwe Glass VR
5 Ebee ka ịzụta drone?
8 Osisi Foto Drone
VR Drone Autoflight imewe na ihe
Ejiri ngwaọrụ na njikwa dị na ya ihe eji eme nma ma nwekwa obi uto. Mmiri ahụ siri ike, na-eguzogide na-enweghị nsogbu ma bịa na-enwe nchebe nke anyị nwere ike iwunye iji mee ka ụgbọelu nyocha mbụ na-enweghị ihe ọghọm nke imebi eriri nke ngwaọrụ ahụ. Na okpokoro nwere mmetụta nke roba dị ezigbo mma na nke ahụ na-agbakwunye mgbakwunye nke mma na ngwaahịa ahụ. Ibu ibu nke njikwa ahụ dị mfe, dị mma iji zere na ike gwụrụ anyị mgbe anyị na-efe efe.
Àgwà nke nkwakọ ọ dị elu karịa atụ anya na ngwaahịa nke usoro a; Ihe ngwugwu a siri ike ma bia na njide ya mere o n’enyere anyi aka ibupu ugbo ala. Tụkwasị na nke a, ngwaahịa niile na-abanye kpamkpam site na ọtụtụ mpempe akwụkwọ ka anyị wee nwee ike ibufe ha na-enweghị ihe ize ndụ nke ịkwaga ma mebie n'oge njem ahụ.
Igwefoto drone bụ Wide n'akuku HD ma na-enyefe vidiyo vidiyo iji nwee ike ịme ụgbọ elu FPV. Ọ na - enye gị ohere idekọ onyonyo na vidiyo, ma na kaadi SD ma ozugbo na ebe nchekwa ama. Iji dekọọ na kaadị SD ị ga-ewepu igwefoto site na mmiri (ị ga-pịa taabụ) na n'ime ị ga-ahụ oghere ebe ị nwere ike itinye kaadị nke na-abata n'ime ebe nchekwa USB.
Igwefoto enwere ike gbanwee n'ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche, nke na - enyere aka nke ukwuu iji gbochie blades ịpụta na vidiyo mgbe anyị chọrọ ịme vidiyo nke ụgbọ elu na ịhazigharị ọhụụ kacha dabara adaba mgbe anyị ga - efega onye mbụ.
Dịka anyị kwurula na mbụ, VR Drone Autoflight bụ mbido ụgbọ mmiri mara mma mfe ofufe. Ọ nwekwara ọnọdụ ọnọdụ onwe onye nke nwere ike ịchọpụta ihe ndị dị na gburugburu ya iji gbochie gị ịmegharị mmegharị nke na-etinye ihe ọghọm enwere ike n'ihe egwu. Akụkụ a dị mma maka ndị ọrụ na-enweghị uche mana ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihere iji mee ihe mgbe ị nwere ọkwọ ụgbọ mmiri nwere ahụmịhe karị.
Ngwaọrụ ahụ siri ike ma nwee oke kwesịrị ekwesị nwee ike ife n’èzí na oke ikuku. Oge nzaghachi ahụ ziri ezi, nke na-enye ohere ka mmiri na-efe n'ụzọ dị mfe. Ọ na-abịa onwem na akpaka-wepụ na ọdịda button, njikwa zuru oke, ọsọ ọsọ abụọ na ọnọdụ acrobatics nke na-enye anyị ohere ịme 360º loops na aka nke igodo. Dị ka ule anyị si dị, batrị na-enye 15 nkeji ụgbọ elu, nke ntakịrị belata ma ọ bụrụ na anyị etinye nchedo agụba mgbe ọ na-efunahụ ụfọdụ nke aerodynamics nke set.
Igwe Glass VR
Igwe Glass VR Drone bụ a dị mfe Starter iko nlereanya. Ha bụ isi okwu nke ị ga - etinye ekwentị gị ka ị nwee ike iji ọnọdụ mbido mmadụ ma nwee ike ịnụ ụtọ ahụmịhe mbụ na ọnọdụ ụgbọ elu a. Ntinye ya dị mfe, ị wụnye ngwa drone na mkpanaka gị, mepee oghere ahụ, tinye ekwentị ahụ idozi ya na ebe kwesịrị ekwesị iji nwee ike iji anya ọ bụla hụ akụkụ ọ bụla nke ihuenyo ahụ, tinye ya na iko ma gị nwere ike ịmalite ofufe.
Nsogbu nke ụdị sistemụ a na - arụ ọrụ na ekwentị mkpanaaka bụ na ọ na - enwekarị ntakịrị lag na vidiyo, nke na-eme ka o siere anyị ike ịkwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na anyị enweghị ahụmịhe ụfọdụ, yabụ anyị anaghị akwado ka ị jiri ọnọdụ ụgbọ elu a n'izu ndị mbụ gị na ngwaọrụ ahụ.
Ebee ka ịzụta drone?
The VR Drone Autoflight Ọ dị na ụlọ ahịa dị na Juguetronica dị na at 199. Dị ka anyị kwuru, ọ bụ ezigbo uru maka ego n'ihi na onye na-abanye na larịị nke na-adị mfe iji ụgbọ elu ọbụlagodi ndị na-anya ụgbọ elu na-enwechaghị ahụmahụ.
Drogbọ ala VR Drone
Dị mfe ofufe
O siri ike ma dị mma
Oge vidiyo na ọnọdụ FPV
Osisi Foto Drone
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » VR Drone Autoflight Nyocha
LG G7 ThinQ, isi nke na-etinyekwa na Notch ama ama